Madaxa WHO oo iska fogeeyay inuu taageero TPLF | Berberanews.com
Home WARARKA Madaxa WHO oo iska fogeeyay inuu taageero TPLF
Madaxa WHO oo iska fogeeyay inuu taageero TPLF
Itoobiya-(Berberanews)-Madaxa Hay’adda Caafimaadka Adduunka (WHO) Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa beeniyay eedeyn uu u soo jeediyay taliyaha ciidamada Itoobiya oo ku saabsan inuu gacan ka geystay hub u soo iibinta Jabhadda Xoreynta Dadka Tigray (TPLF).
Kooxda TPLF ayaa dagaal kula jirta ciidamada federaalka.
Dr Tedros waa Tigreeyahan waxaanuu ahaa wasiirka caafimaadka dowladii hore ee Itoobiya, taas oo ay hogaaminaysay kooxda TPLF. “Waxaa jiray warar sheegaya in aan dhinac laacayo xaaladdan. Tani run maahan,” ayuu ku qoray Twitter.
“Waxaan rabaa inaan idhaahdo waxaan ahay hal dhinac oo kaliya waana dhanka nabada,” ayuu raaciyay.
Hadalkiisa ayaa yimid kadib markii Gen Berhanu Jula shirkiisa jaraa’id uu ku sheegay uu ku sifeeyay Dr Tedros “dhagax dhagaxna aanu asalkiisa ka tagin” si uu u taageero kooxda TPLF kana caawiyo sidii ay hub ugu heli lahaayeen.
Gen Berhanu wuxuu yidhi: “Kama fileyno inuu garab istaago Itoobiyaanka oo uu cambaareeyo dadkan, wuxuu sameynayay wax walba oo uu ku taageerayo, wuxuu u ololeeyay in dowladaha deriska ah ay cambaareeyaan dagaalka,” ayuu yidhi Gen Berhanu.
Muu soo bandhigin wax cadeymo ah oo lagu taageerayo eedeymahiisa. Boqolaal ayaa ku dhintay colaada ka aloosan Tigray tan iyo bilowgii bishii Nofeembar.
“Qalbigeygu wuxuu u jajaban yahay gurigeyga, Itoobiya, waxaana ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada inay ka shaqeeyaan nabadda iyo in la hubiyo amniga dadka rayidka ah iyo helitaanka caafimaad iyo gargaar bani’aadamnimo,” ayuu Dr Tedros ku soo qoray Twitter-ka
Madaxa Hay'adda Caafimaadka Adduunka
Previous articleDr Edna Aadan maxay ka tidhi shakhsiyaddii Marxuum Cumar Carte?
Next articleAfrica Somalis Worry About Potential US Troop Withdrawal From Their Fragile Country